alpha လုံခြုံရေး-Antivirus ကို 1.0 APK ကို
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » alpha လုံခြုံရေး-Antivirus ကို 1.0
alpha လုံခြုံရေး, ခြုံငုံ Antivirus ကို & privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက် & Wi-Fi လုံခြုံရေး။
alpha လုံခြုံရေးသင့်ရဲ့ device ကိုပိုကောင်းအောင်တစ်ဦးအလင်းနှင့်ထိရောက်သော app ကိုတိုးမြှင့်, Antivirus ကို, wifi လုံခြုံရေးအစောင့်, ပုဂ္ဂလိကဘရောက်ဇာကိုသမိုင်းသန့်စင်, ပြည့်စုံသော app ကိုသော့ခတ်သည့်စနစ်နှင့်ဖုန်း accelerator တစ်ခုပါပဲ။
alpha လုံခြုံရေး, မိုဘိုင်းလုံခြုံရေးနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူမှ Anti-virus ကို & privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအကောင်းဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုရောက်စေဖို့ရည်မှန်းရန်ရည်မှန်း။
Featuring alpha လုံခြုံရေး:
အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုအတွက်ခိုးယူ password ကိုစိုးရိမ်? အများပြည်သူအတွက်အခမဲ့ wifi နှင့်အတူချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ pop-up ကြော်ငြာတွေကအာရုံခံရ? alpha လုံခြုံရေးသင်သည်ခြုံငုံ wifi ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးထောက်ပံ့ကြောင့်ပေါ်လာသည်တစ်ချိန်ကဗိုင်းရပ်စ်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအစ wifi ၏ကွန်ယက်မြန်နှုန်းကိုစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။
ဘက်စုံ applock စနစ်က
သင့်ရဲ့ privacy နဲ့ဘာတစ်ခုမှသင့်ရဲ့ပုဂ္ဂလိကအာကာသပိုင်ဆိုင် peek မှအခြားသူများအားရပ်တန့်ငြီးငွေ့ရယူခြင်း? App ကိုသော့ခတ်သင်ကူညီနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သော Facebook က, ကို Message, Instagram ကို, WhatsApp ကို, ကို SMS, Contact, ပြခန်း, ဒါမှမဟုတ်သင်ရွေးချယ်အခြားမည်သည့် apps များအဖြစ်, သင်သော့ခတ်လိုသော app ကိုအဘို့သင့်ပုဂ္ဂလိက password ကိုချိန်ညှိခြင်း။ တစ်စုံတစ်ဦးကမှား password ကို inputs လြှငျ, Applock system ကိုအလိုအလျောက်ကျူးကျော်များအတွက် selfies ယူပါလိမ့်မယ်။
quick scan က
သငျသညျဗိုင်းရပ်စ်ပိုး, privacy ကို, junk အပေါင်းတို့နှင့်ဗိုင်းရပ်စ်ခြိမ်းခြောက်မှုပပျောက်, ထို browser ကို privacy ကိုသမိုင်းနှင့် cache ကို junk ကွာရှင်းရှင်းလင်းလင်း scan ကူညီပေးခြင်း။ ဖုန်းကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအနေနဲ့အဆင်ပြေအရာဖြစ်လာသည်။
သင့်ရဲ့ SD ကဒ်တစ်ခုစေ့စေ့စပ်စပ်စကင်ရှိသည်။ သင့်ရဲ့ဖိုင်များကို protected ဖြစ်ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
ကိုယ့်တဦးတည်းခြေလှမ်းအတွက်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအရှိန်မြှင့်။ alpha လုံခြုံရေးကိုလည်းသင့်ဖုန်း၏အပူချိန်ကိုတိုင်းနှင့် CPU ကို၏ပုံမှန်အပူချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်။ တော့ဘူးအပူလွန်ဖြစ်လာသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုစိုးရိမ်မနေပါနဲ့။
Samsung, LG Huawei နှင့်အခြားအ 9000 + ကွဲပြားခြားနားသောဖုန်းကိုမော်ဒယ်များအတွက် Alpha လုံခြုံရေးထောက်ခံမှု
alpha လုံခြုံရေးသင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်ပေးရန်နှင့်အရှိန်အဟုန်မြှင့်ရန်, သငျသညျဗိုင်းရပ်စ်ပိုး, privacy ကို, cache ကိုဖိုင်များ, wifi လုံခြုံရေး, SD ကဒ် scan နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အားလုံးဗိုင်းရပ်စ်ခြိမ်းခြောက်မှုဖြေရှင်းရန်ကူညီပေးနေ, ဗိုင်းရပ်နှင့် privacy ကျူးကျော်ထံမှရှင်းရှင်းလင်းလင်း browsing history နှင့် cache ကို junk Real-time ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးထောက်ပံ့ဖို့ကဒီမှာ သင့်ရဲ့ဖုန်း။
သင်သည်သင်၏ဖုန်းတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးများသင်ပြောပြကြောင်းစာမကျြနှာရှိပါတယ်ဆိုရင်သူတို့ကမမှန်သောကြော်ငြာများနှင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့မြှင့်တင်ရေးတို့ကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ကြသည်! "Settings" ကိုသွားပါက, control panel ကိုဖွင့်ပွတ်ဆွဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကိုသွားပါ ကျေးဇူးပြု. - "တုံ့ပြန်ချက်" - "အထွေထွေ" - "ပရိယာယ်သို့မဟုတ်အာလဖလုံခြုံရေးတပ်ဆင်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေ" နှင့်ကျွန်တော်အနေဖြင့်အဘယ်မှာရှိမြှင့်တင်ရေးနေရာချထားနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ပထမဦးဆုံး version ကို
alpha လုံခြုံရေး-Antivirus ကို
7.19 ကို MB
နိုဝင်ဘာ 18, 2016
alpha လုံခြုံရေး Tech မှ